Home Wararka (Daawo) Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka ee FEIT oo sheegay in la hakiyay kuuraas...
(Daawo) Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka ee FEIT oo sheegay in la hakiyay kuuraas uu kamid yahay Hop#086
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal Muuse Geelle Yuusuf ayaa sheegay in howlaha doorashooyinka Golaha Shacabka intooda badan ay qabsoomeen, sidoo kalena inta hadda ka harsan ay si xowli ah ku socdaan dhawaana ay soo dhamaan doonaan.
Guddoomiyaha oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda lagu guuleystay in la dhameyatiro doorashada labada Aqal ee Gobolada waqooyi iyo degaan doorashada labaad ee Baraawe, wuxuuna ku sheegay in ilaa iyo 165 Xildhibaan la doortay 110 kalena ay harsan yihiin.
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday kuraas la doortay oo ku dhawaaqista natiijadooda la hakiyay, wuxuuna sheegay in, iyaga oo ilaalinaya habraaca doorashada ay horay u joojiyeen doorashada kuraasta Saddex kursi oo kala ah , HOP154 oo loo doortay Sareedo Maxamed Cabdalla, HOP103 oo ah kursigii uu ku fadhiyay Maxamed Cismaan Jawaari iyo HOP086 oo ahaa kursigii uu shalay ku soo baxay Fahad Yaasiin
Wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray guddoomiyaha in Saddexdaasi kursi habraacii loo maray uu qalmaday, sidaas daraadeedna inta laga saxayo ay sidaasi ahaan doonaan, isaga oo raja ka muujiyay in degaannada weli soorashooyinka ku harsan yihiin in si deg deg ah looga dhameystiro.
Previous articleMa Laga yaabaa inuu Fahad Noqdo MW Soo Socda ee 2022-26 iyo ka Shishe?
Next articleSheekh Usuuli oo ka mid ah culumada ugu aqoonta badan oo talo siiyay Xildhibaanada
MW Farmaajo Maxaa Beenta ku khasba? Akhriso
[XOG] Guddoomiyaha Guddiga Doorashada oo lagu cadaadinayo inuu is-casilo iyo Guddiga...